विद्यालयका सवै विद्यार्थी एकै कक्षामा | langtangnews.com
विद्यालयका सवै विद्यार्थी एकै कक्षामा
धुन्चे , शीर्षक सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर सत्य हो । जेठ २४ गते विद्यालय पुग्दा एक मात्र शिक्षकले १देखि ५ कक्षसम्मका १८ जना विद्यार्थीलाई शिक्षण गरिरहेका थिए । कुरा टाढाको हैन रसुवा सदरमुकाम धुन्चे कै भीमली प्राविको हो ।
विद्यालय समयमै पुग्दा एक जना वालशिक्षिकाको भरमा चलेको देखियो । कतिदिनदेखि यस्तो भएको भन्ने पत्तो छैन । प्रधानाध्यपक मोहन गिरी र उनका पत्नि सुमित्रा गिरी काठमाण्डौ गएको र अर्का शिक्षिका दावालामो तामाङ छोरी भेट्न गएको भन्ने जवाफ पाईयो ।
नीजि विद्यालय प्रतिको आकर्शष बढिरहेको र सरकारी विद्यालय धमाधम गाभिदै गरेको अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा सरकारी विद्यालयको यस्तो चालाले कसरी विद्यार्थीहरुले अहिलेको प्रबिधि युक्त शिक्षामा अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गरुन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नजिकैको यो विद्यालयको समय समयमा अनुगमन त गर्ने गरेको छ ?
विद्यालयमा १ कक्षामा ५ , २ मा ५ , ३ मा २ , ४ मा ३ र ५ मा ३ गरी १८ जना बालबालिका पढ्नका लागि विद्यालय आउँछन् । तर शिक्षकहरुको यस्तै चालाले होला शिक्षकको दरबन्दी बालकक्षा सहित ४ जना हुँदा हुँदै पनि बहुकक्षा शिक्षण बिधि चलिरहेको छ । १ देखि ५ कक्षासम्मका सवैलाई सँगै एउटै कक्षामा राखेर एक पटक पढाउँदा कस्तो पढाई होला ? कुल लेवलको शिक्षा हाँसिल गरिहेका होलान् भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा त राखेको छ तर अध्ययन अध्यपन अनियमितताले ढुक्कले पढ्नसक्ने बाताबरण जिल्ला सदरमुकामै छैन भने अन्यत्र कहाँ के अवस्थामा होला ?